सिमसार क्षेत्र खुम्चिंदै-मासिंदै गएपछि जलपंक्षीहरुको संख्या घट्दै - ParyatanBazar.com
सिमसार क्षेत्र खुम्चिंदै-मासिंदै गएपछि जलपंक्षीहरुको संख्या घट्दै
चैत ४,भैरहवा ।नेपालमा रहेका सिमसार क्षेत्र खुम्चिंदै-मासिंदै गएपछि जलपंक्षीहरुको संख्या घट्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ। सन् १९८७ देखि जलपंक्षीहरुको गणना र अध्ययन गर्दै आएको एसियन जलपंक्षी गणना नेपालको तथ्यांकले सिमसार क्षेत्रमा जलपंक्षीहरुको संख्या घट्दै गएको देखाएको हो।
सिमसार क्षेत्रमा देखिएका बाधा व्यवधान, बासस्थानको विनास, चोरी सिकारी लगायतका कारण सिमसारमा आश्रित जलपंक्षी घट्दै गएको चराविद्हरुको निश्कर्ष छ।
नेपालमा भइरहेको अव्यवस्थित विकास लगायतका कारण पंक्षीहरुको बासस्थानमा समस्या परेको छ। बढ्दो क्रममा भइरहेको तालतलैया, पोखरी सुकाउने कार्य, खेतबारीमा विषादीको प्रयोग कार्यले जलपंक्षी-चराहरुको बासस्थान विनास हुँदै गएको छ।
‘नेपालको केही सिमसार क्षेत्रमा जलपंक्षीको संख्या बढे पनि अधिकांश क्षेत्रमा संख्या घट्दै गएको छ’, एसिएन वाटर बर्ड सेन्सस नेपालका संयोजक एवं वरिष्ठ चराविद् डा. हेमसागर बराल भने, ‘जलपंक्षीहरुको संरक्षणका लागि हामी सबै लाग्नुपर्ने अवस्था छ।’
विभिन्न देशबाट बसाइँसराइ गरेर आउने जलपंक्षीहरुको संख्यामा पनि केही कमी आएकोले संख्यामा कमी देखिएको उनको भनाइ छ। पछिल्ला वर्षहरुमा रुपन्देहीको गैडहवा ताल, गजेडी ताल, कपिलबस्तुको जगदीशपुर ताल, सुनसरीको बर्जु तालमा जलपंक्षीको संख्यामा निकै कमी आएको छ।
उनका अनुसार सन् २०२० मा १८ हजार जलपंक्षी रहेको जगदिशपुर तालमा हाल संख्या घटेर १२ हजारमा पुगेको छ। त्यस्तै सुनसरीको बर्जु ताल तथा कोशी टप्पुमा पनि चराको सङख्या घट्दो क्रममा रहेको छ। चितवनमा संख्या यथावत छ भने पोखरामा घटबढ भइरहेको छ।
अन्य स्थानमा जलपंक्षीहरुको संख्या घट्दो अवस्था रहे पनि लुम्बिनी क्षेत्रमा भने विगत भन्दा आंशिक रुपमा बढेको छ। पर्यटकको आर्कषणको रुपमा रहेका जलपंक्षीहरुलाई लुम्बिनी विकास कोषले संरक्षण गर्दै आएको छ। जलपंक्षी मध्ये लोपउन्मुख अवस्थामा रहेको सारस लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको नगरपंक्षी समेत हो।
लुम्बिनीको सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा बुद्ध जन्मस्थल क्षेत्र भएकाले चोरी सिकारी तथा अमानवीय कार्य कम भएकाले लुम्बिनीमा जलपंक्षीहरु आंशिक रुपमा बढेको वरिष्ठ चराविद् बरालको भनाइ छ।
पानी, सिमसार र घासेमैदानमा समेत ३ सय बढी चराहरु लुम्बिनी आसपास देख्न पाईने हुदा मुलुकको चरा पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन सकिने हिमाली प्रकृतिका कार्यक्रम निर्देशक डा. तुल्सी सुवेदी बताउँछन्।
लुम्बिनी तथा आसपासका क्षेत्रलाई चराहरुको स्वर्गको रुपमा टिकाइ राख्न सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सरकारका साथै स्थानीय समुदायको अग्रसरता र अपनत्व लिन आवश्यक रहेको उनले बताए।